apple iphone 12 mhando - kuenzanisa, specs, uye ndeipi yakanakira iwe
Kuru Nhau & Ongororo Apple iPhone 12 mhando - kuenzanisa, tsananguro, uye ndeipi yakanakira iwe
Apple iPhone 12 mhando - kuenzanisa, tsananguro, uye ndeipi yakanakira iwe
iPhone 12 mhando
Ndeipi iPhone 12 yaunofanira kutenga? Mhando nyowani dze iPhone 12 dzinoshandisa mutero unorema kana zvasvika pakupindura iwo mubvunzo.
Apple yakazivisa ina iPhones nyowani, zvishandiso nyowani isu isu & apos tati tamborapwa kune imwe nguva, uye mikana yekukwiridzira yave kuita kunge yakanyanya kudarika nakare kose. Iyo inodhura iPhone 12 ikozvino yave kuwanikwa nemaviri saizi ayo akakodzera zvakakwana kuteedzera chero kuravira, nepo mamwe maficha-akapfuma maPro modhi ikozvino akakurisa kupfuura nakare kose uye, zvakasikwa, anouya pamwe neese epamusoro maficha ane Apple mune arsenal yayo Iyo iPhone 12 Pro Max inomira seye yepamberi yepamusoro iPhone nyowani, kunyange mutengo wayo wakakwirawo kupfuura hama dzayo.
Nevashandisi vazhinji ve iPhone vakatenderedza, it & apos; zvinopfuura zvakasikwa zvekuti avo vanoratidzira modhi yekare vaizowana iyo nyowani iPhone nhevedzano inonakidza. Zvisinei nekuti izvo iPhones nyowani hadziuye nema 120Hz ekuratidzira, chinova chinhu chakanakisa kuve nacho, ino ingori nguva yakanakisa yekusimudzira chimbo chako chekare kuchitsva iPhone 12 , iPhone 12 mini , iPhone 12 Pro , kana iPhone 12 Pro Max : maPhones ese anouya neimwe yeanokurumidza uye anonyanya kushanda machipisi, ane maOLED ekuratidzira, akasiyana kamera setups, uye pakupedzisira, anosanganisira zvine mutsindo dhizaini yakanakisa Apple yakambouya nayo, nostalgic flashback kune iyo iPhone 4 / 4s nguva.
Asi ndeipi iPhone 12 modhi yaunofanira kutenga? Tichasvika pasi peizvi nekuyedza imwe neimwe modhi nyowani uye kujekesa kuti ndeipi nyowani iPhone 12 foni iri mukana wakakodzera iwe.
iPhone 12 mini specs uye kuongorora
iPhone 12 mini pfupiso
Usatendera iyo 'mini' moniker kukunyengedza: iyo iPhone 12 mini yakangofanana neiyo iPhone 12 Pro / 12 Pro Max nekuda kweA14 Bionic chipset mukati. Chokwadi, pane & apos; inongova 4GB ye RAM uye emhando yepamusoro ane matanhatu, asi izvo zvingangodaro hazvifanirwe kunge iri nyaya sezvo Apple & apos; s memory manejimendi inowanzo kuve yakanyatsogadziriswa.
Ratidza 5.4 inches 2340 x 1080 pixels
Kamera 12 MP (Dual kamera) 12 MP kumberi
Kuchengetedza 64GB, haina kuwedzerwa
Bhatiri 2227 mAh
IWE iOS 14.x
Mitengo inotanga pamadhora 699 pamatanho e64GB, $ 749 yesarudzo ye128GB, uye $ 849 yeiyo 256GB vhezheni. Iyo yakavhurwa 64GB iPhone 12 inoenda $ 729, 128GB - $ 779, uye iyo 256GB imwe iri $ 879.
- 5.4 ', A14 Bionic, 4GB RAM, mbiri-kamera, 5G
$ 699Tenga kuApple
Foni 12 mini iri pamutemo
Kuenzanisa iPhone 12 mini vs iPhone 11
iPhone 12 tsananguro uye kuongorora
iPhone 12 pfupiso
Iyo iPhone 12 inobudirira iyo iPhone 11, uyezve, iyo iPhone XR seiyo 'inodhura' iPhone muApple & apos; s mutsara. Asi, kusiyana neiyo iPhone 11 uye iPhone XR, izvo zvaive zvakafanana zvakafanana kune imwe, iyo iPhone 12 inotora dhizaini nyowani, iyo OLED kuratidza, uye 5G rutsigiro. Sezvakangoita iyo yakasara yeiyo iPhone 12 mutsara, iyo iPhone 12 inouya ne5nm A14 Bionic chipset, saka panenge pasisina & apos; t ive chero chinokanganisa mune yekuita chikamu.
Ratidza 6.1 inches 2532 x 1170 pixels
Bhatiri 2815 mAh
Kutaura kuti iyo iPhone 12 ndiyo yakanakisa-yemari-nyowani iPhone nyowani zvimwe yaisazove yekuwedzeredza. Kunze kwemakamera ari nani, iyo iPhone 12 yakafanana zvakanyanya neiyo iPhone 12 Pro, iyo inotengesa zvimwe zvakawanda. Sezvineiwo, iyo iPhone 12 inorova yakanakisa chiyero pakati pezvinhu nemitengo. Iyo iPhone 12 inowanikwa preorder izvozvi uye zviri pamutemo rova ​​masherufu Gumiguru 23.
Mitengo inotanga pamadhora 799 yemusiyano we64GB, $ 849 yesarudzo ye128GB, uye $ 949 yeiyo 256GB vhezheni. Iyo yakavhurwa 64GB iPhone 12 inoenda $ 829, 128GB - $ 879, uye iyo 256GB imwe iri $ 979.
- 6.1 'Super Retina XDR, Apple A14 Bionic, 5G, Dual kamera
$ 799Tenga kuApple
Tenga iPhone 12paBest Buy (Verizon: AT & T: T-Mobile)
Kuenderera mberi kuverenga:
iPhone 12 ndeyepamutemo: Gamuchirwa ku5G
iPhone 12 vs Samsung Galaxy S20 FE
Kuenzanisa iPhone 12 vs OnePlus 8T
iPhone 12 Pro specs uye kuongorora
iPhone 12 Pro pfupiso
Iyo iPhone 12 Pro ndiyo idiki kune mbiri nyowani-ekupedzisira maPhones. Nepo pakutanga pakuona ichitaridzika kunge yakafanana neiyo iPhone 12, iyo iPhone 12 Pro ine akati wandei masimba pane iyo inodhura modhi. Iyo ine 2x telephoto kamera yakabatsirwa neiyo LiDAR sensor yeiyo chaiyo kudzika-kuyera, ese ari maviri asipo pane anodhura mamodheru. Iyo iPhone 12 Pro inoratidzira 6.1-inch kuratidza (yakati kurei kupfuura iyo 5.8 'pane iyo iPhone 11 Pro) uye inotanga pamutengo we $ 1,000, uye inosvika muApple & apos; s matatu siginecha mavara: sirivheri, graphite, uye goridhe, se pamwe neyechina, nyowani nyowani sarudzo sarudzo, yemhando yeblue. Kuchengeterwa kweiyo base modhi ndeye 128GB, uye iwe unogona zvakare kutenga iyo 256GB uye ne512GB shanduro.
Kamera 12 MP (Triple kamera) 12 MP kumberi
Kuchengetedza 128GB, haina kuwedzerwa
Mitengo inotanga pamadhora 999 yemusiyano we128GB, $ 1099 yesarudzo ye256GB, uye $ 1299 yeiyo 512GB vhezheni, zvisinei kana mutakuri-akakiyiwa kana SIM-yemahara.
- 6.1 'Super Retina XDR, Apple A14 Bionic, 5G, Triple kamera
$ 999Tenga kuApple
Tenga iPhone 12 PropaBest Buy (Verizon: AT & T: T-Mobile)
iPhone 12 Pro ndeyepamutemo
iPhone 12 Pro vs Samsung Galaxy S20
iPhone 12 Pro Max tsanangudzo uye kuongorora
iPhone 12 Pro Max pfupiso
Iyo iPhone 12 Pro Max ine 6.7-inch skrini (yakakura zvishoma kupfuura iyo 6.5 'pane iyo iPhone 11 Pro Max), uye mutengo wayo wepasi wakaiswa pa $ 1,100. Iyo inosvika mune imwe sarudzo yemavara: sirivheri, girafu, goridhe uye iyo nyowani yebhuruu sarudzo, uye zvakare inopihwa mune imwecheteyo masimba ekuchengetedza: 128GB, 256GB, uye 512GB.
Ratidza 6.7 inches 2778 x 1284 pixels
Bhatiri 3687 mAh
Mitengo inotanga pamadhora 1099 yemusiyano we128GB, $ 1199 yesarudzo ye256GB, uye $ 1299 yeiyo 512GB vhezheni, zvisinei kana mutakuri-akakiyiwa kana SIM-yemahara.
iPhone 12 akateedzana mamodheru - Zvizere mamaki
Ratidza 6.7 'Super Retina OLED, 2778x1284 pixels
6.1 'Super Retina OLED, 2532x1170 pixels
5.4 'Super Retina OLED, 2340x1080 pixels
Apple A14 Bionic Apple A14 Bionic Apple A14 Bionic
Kuchengetedza 128GB, 256GB, 512GB
Kamera 12MP Ultra-yakafara, 12MP yakafara, 12MP telephoto, 12MP kumberi
12MP Ultra-yakafara, 12MP yakafara, 12MP telephoto, 12MP kumberi
12MP Ultra-yakafara, 12MP yakafara, 12MP kumberi
2815mAh 2815mAh 2227mAh
Ndeipi iPhone 12 ndiyo yakanakira iwe?
Kana iwe & apos; re chikamu cheiyo ecosystem uye kazhinji uchienda kune yakakura uye yakanakisa iPhone, wakashandisa ingave iyo iPhone 11 Pro Max kana iyo iPhone XS Max, kana kungogara uchienda kune yakanyanya kunaka, saka hapana & apos; s haina nzira yechipiri nezvazvo : iwe unofanirwa kupfupisa iyo iPhone 12 Pro Max.
Kana iwe uchiwanzofarira saizi yescreen uye yakazara tsoka yeiyo iPhone XR / iPhone 11 / iPhone 12, asi uchida kuenda kune imwe oomph, ipapo iyo nyowani iPhone 12 Pro inoita senge mutambo wakaringana iwe. Iine zvese, kunyangwe mutengo unodhura weiyo iPhone 12 ungangodaro unoreva nhau dzakaipa dzeiyo iPhone 12 Pro.
Iyo iPhone 12 inofanirwa kutariswa neavo vanopika neiyo iPhone 11 kana iyo XR. Asi usazorega icho chichiganhurira chinhu: iyo iPhone 12 inonzwa senge yakanaka kupinda mukati meApple ecosystem uye inofanirwa kuve yakasarudzika nevashandisi veApple vanoda kushandura. Kana iwe & apos; tichiri kubatirira pane iyo iPhone 6 Plus, iPhone 6s Plus, iPhone 7 Plus kana iPhone 8 Plus, ipapo iyo iPhone 12 inofanira kutorwa mukufunga kwako.
Kana iwe & apos; tichiri kuzunza yekare, diki iPhone, senge iyo iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 7, iPhone 8, kana iPhone SE (1st gen), ipapo iyo nyowani iPhone 12 mini inofanira kunyatso kumutsa kufarira kwako. Iyo idiki nyowani nyowani iPhone, iine 5.4-inch inoratidzira, asi nekuda kweye bezel-busting dhizaini, iyo & maapos; s anonyanya kuumbana kupfuura iwo 4.7-inch michina ine yekare dhizaini. Nekudaro, vanhu vasingatsvage foni hombe vanogona kuwana mutambo wavo wakaitwa kudenga neiyo iPhone 12 mini.
Yakanakisa iPhone 12 madhiri muna 2021
Tarisa uone akanakisa madhiri pane chero eiyo iPhone 12 akateedzana nekushanyira zvinongedzo pazasi.
Yakanakisa iPhone 12 Pro Max inobata paT-Mobile, Verizon, AT & T, BestBuy, kana kukiyiwa
Yakanakisa iPhone 12 Pro inobata kuVerizon, T-Mobile, AT & T, uye isina kukiyiwa
Yakanakisa iPhone 12 mutengo uye madhiri paT-Mobile, Verizon, AT & T, kana kukiyiwa
Yakanakisa iPhone 12 mini madhiri kuVerizon, T-Mobile, AT & T, uye yakavhurwa
iPhone 12 Pro Max ikozvino inoshanda ne5G, katatu kamera, zvimwe
iPhone 12 Pro Max vs Galaxy Cherekedza 20 Ultra iPhone 12 Pro Max vs iPhone XS Max
Yakanakisa iphone se bhatiri kesi
nougat yemoto x yakachena
yakanakisa samsung galaxy note 4 kesi
Samsung Galaxy S5 Inoshanda Ongororo
Deal: tenga Motorola Moto X Yakachena Edition, tora iyo Moto 360 Sport mahara
PlayStation 5 restock yekutengesa, kuAmazon, Walmart, GameStop, kana Target
T-Mobile One Plus International add-on iri kuenda, ichitora risingagumi LTE hotspot nayo
Google Mubatsiri & apos; s Nyowani Mazai eIsita anodzokororazve kekutanga DBZ & apos; s Goku yakava Super Saiyan
LG Aristo 5 ndiyo nyowani nyowani yakachipa inowanikwa paT-Mobile neMetro
iPad Pro 2021 vs iPad Air 4: Yakawanda sei mutsauko?
Deal: Samsung Level U Pro Makaralifoni mahedhifoni anowana hombe 65% kuderedzwa paAmazon
HTC One (M8) ine Lollipop vs One (M8) neKitKat: UI kuenzanisa
Deal: Tenga Verizon iPhone X kana iPhone 8, tora yechipiri iPhone yemahara (hapana kutengeserana kunodiwa)